Soomaalida oo noqotay ajinebigii ugu dambeeyey ee laga daad-gureeyey dalka koonfurta Suudaan – Radio Daljir
Soomaalida oo noqotay ajinebigii ugu dambeeyey ee laga daad-gureeyey dalka koonfurta Suudaan
Diseembar 31, 2013 1:53 b 0
Muqdisho, December 31, 2013 – Magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray muwaadiniin Soomaali ah oo laga soo daad-gureeyey dalka Koonfurta Suudaan, halkaas oo ay ka aloosan yihiin colaad u dhexaysa dowladda iyo mucaaradka oo u abaabulan hab-beeleed.
130 muwaadiniin Soomaali ah ayaa shalay soo gaaray muqdisho, kuwaas oo noqonaya shisheeyihii ugu dambeeyey ee ka cararay dalka ugu da?da yar dunida. Wakaalada wararka ee AFP ayaa sidaas qortay.
Wasaaradda arrimaha dibeda ee Soomaaliya waxay ku tilmaantay dadkan inay qayb ka yihiin dufcadii ugu dambaysay oo ah Soomaalida joogtay koonfurta Suudaan, waxayna ka koobnaayeen 335 qof oo intooda badan ku xanibnaa magaalada Bor.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay bixisay lacagta daad-guraynta dadka rayidka ah ee ka shaqaysanayey dalka Koonfurta Suudaan, balse ku xanibmay dagaalada iyo colaada u dhexaysa dowladda Madaxweyne Kiir iyo mucaaradka oo uu hugaamiyo Reikh Meschar.
?Waxaan ku jirnay guri ku yaala magaalada Bor xataa helitaanka cuntada way yarayd.? Maxamed Aadan oo dadka soo noqday ka mid ah ayaa sidaas u sheegay AFP.
Soomaali aad u fara badan ayaa deganaa dalka Koonfurta Suudaan qaar ayaa ganacsi ku lahaa halka kuwa kalena ay shaqo u joogeen. Colaada koonfurta oo ah mid adag ayaa salka ku haysa dagaalo siyaasadeed waxaana haatan socda dadaalo caalami ah.
Baahin: Isniin, 30, Dec 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Macamed C Cali (Kooshin) ~ Daljir ~ Garowe